ဝါးခယ်မ : ကလေးအမေ ကလေး ( ၁၁ နှစ်သမီး အရွယ် မိခင် )
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:01 AM
တိတ်တိတ် ပုန်း ဟာသများ စုစည်းမှု
မြို.လေး ရဲ. ဓမ္မဆာယာများ
ဧရာဝတီရဲ. မရှုမလှ အရှုံးအတွက် ထိုသို. ခံစားခဲ့ကြရ...
ဧရာဝတီရဲ. ၂၀၁၃ MNL ရာသီ ပထမဆုံး ရှုံးပွဲ
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်း ထုတ်ဝေခဲ့သော သတင်းစာမျ...
ဂမ်နမ် စတိုင် ဆိုတာ ဘာကို ရေးတာပါလဲ
၂၀၁၃ MNL တတိယပွဲ ဧရာဝတီ-မကွေး
ရေခဲတောင်ပိုး (သို.) ရှီးပဒီး
၀ါးခယ်မ အထက ၁ ဆရာကန်တော.ပွဲမှ သြ၀ါဒ စကား အချို.
ီDMPA သားဆက်ခြား ထိုးဆေးများ
လူပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း
ဒီ တစ်ခါတော. စူပါ ဖရဲသီး (သိသူဖော်စား မသိသူ....)
သူများအကြောင်းလည်း မပြောတတ်ပါ စပ်မိစပ်ရာ အနုပညာလော...
စတုတ္ထအကြိမ် ၀ါးခယ်မ GTI ဆရာကန်တော.ပွဲ
Best Fans In The World ဆု မြန်မာနိုင်ငံ ပရိသတ် ရရှ...
တစ်ချိန်က အကယ်ဒမီ စိုးသူ (၂၀၁၂ အင်တာဗျုး)
၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ..၀ါးခယ်မ အ-ထ-က (၁) ဆရာကန်တော.ပွဲအ...
နာမည် နှင်. ချစ်ကံခေရခြင်း ဆက်စပ်မှုများ
သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အိန္ဒိယ ဆေးကျောင်းသူလေး
မြို.သား တစ်ဦးရဲ. ဥပဒေ ပညာပေး စာအုပ် မိတ်ဆက်
၂၀၁၃ MNL ရာသီဦး တမူထူးသော ရင်တွင်းဖြစ်များ
မက်ဆိုပိုတေးမီးယားပြန် ဦးကျော်စိန် (သို.) ရဲမင်ြး...
အကျွမ်းတ၀င် ရှိသော သူစိမ်းများ
ဧရာဝတီ ယူနိုက်တက်ရဲ. ဒုတိယ ပွဲ
မြို.လေးရဲ. တစ်ချိန်က ၀င်ရာ..ထွက်ရာ ..တစ်ခုတည်းသော...
ခံတွင်း အနံ.နံခြင်း (Halitosis)
လာပြန်ပြီ ဓါးကို ပေးတဲ့နာမည်က..
၀ါးခယ်မမြို. ကရင်နှစ်သစ်ကူး အခမ်းအနား
ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ ( အိမ်ထောင်ရေး နှင်. လင်...
တန်ဆေး...လွန်ဘေး (ကြက်ဥသောက် ၍ သေရသူ)
၀ါးခယ်မက မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်
အင်္ဂလန်က ခောတ်သစ် လာဘ
ထောင်ကို ခြင်ထောင် မှတ်သူ
အ-က-က ၁ ဆရာကန်တော.ပွဲ ခရီးစဉ် (၃)
အ-ထ-က ၁ ဆရာကန်တော.ပွဲ ခရီးစဉ် (၂ )
ံHuman Zoo ( ရုံသွင်း ခံ လူသားများ )
ဒိလိုရေး၍ ဒီလိုပြောကြသည် ( ၆-၁-၂၀၁၃ ဧရာဝတီ-မနောမြေ...
၀ါးခယ်မမြို့၊အ.ထ.က(၁) ဆရာကန်တော့ပွဲ (၁)...ကောင်းမြ...
ထာဝရ ဥယျာဉ်တော် တမ်းချင်းများ
နှစ်ဦိးဆုမွန် နှင်. SS Avenue ၏ ပညာသင်ထောက်ပံ.ရေး...
ပရိသတ်ကိုလှုတ်ခတ်စေခဲ့သော အပြောင်းအရွှေ.များနဲ. ၇န်...
အ-ထ-က ၁ ဆရာကန်တော.ပွဲ ခရီးစဉ် (၁ )
ကြီးတိုင်းမှီ ငယ်တိုင်းချီ လို. ဖြစ်ပါ.မလား
မြန်မာ.အမျိုးသမီးအိနြေ္ဒ ကမ္ဘာသိစေခဲ့သော ဟောလိဝုဒ် မ...